Tiketi na Eiffel Tower | Akụkọ Njem
La Eiffel Tower Ọ bụ kpochapụwo ndị njem na Paris. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ileta isi obodo France ma ghara ịrịgo akara ngosi nke owuwu nke narị afọ, mana n'ihi nke ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ na-anọkarị.
You na-aga Paris? You chọrọ ịma ụlọ elu a ma ama? Mgbe ahụ gosi nke a ozi gbasara Eiffel Tower na tiketi ya, esi zụta ha, ego ole ha na-eri, ụdị tiketi dị ebe ahụ. Niile ebe a.
1 Towerlọ Eiffel
2 Tiketi na Eiffel Tower
Ihe mbu na mbu, nkowa nkpuru nke ulo elu. E wuru ya na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, Ọ bụ ya mere m ji kwuo n'elu na ọ bụ akara nke mmalite nke narị afọ. Ihe owuwu ahụ were ihe dị ka afọ abụọ n’ihi kwesịrị ịdị njikere maka Ememe World Fair World nke 1889.
Ọ bụ ụlọ ọrụ France mebere ya ma wuo ya Gustav Eiffel kwuru, n'ihi ya aha ya, n'oge ahụkwa, atụmatụ ya dịịrị ọtụtụ egwu. A kọlụm nke ọchịchịrị ígwè na-ebili n'elu ọmarịcha na mara ụlọ nke Paris! Ajọ! O yiri ka Eiffel sitere n'ike mmụọ nsọ nke Latting Observatory na New York City na mgbe di na nwunye nke ụzọ dị mfe eserese emesia ụdị nke ikpeazụ mechara wee malite iche echiche banyere otu esi arụ ya.
Owuwu ulo a malitere na 1887 ma malite ya na March 31. Ejiri ya wuo ya ígwè puddled, rụrụ, na ihe owuwu ahụ dum dị puku iri, otu narị na tọn. Kwa afọ asaa ọ na-enweta agba ọhụrụ, ihe dị ka tọn 60, n'ihi na ị ga-akpachara anya ka ọ ghara ịta nchara. Lọ elu Ọ dị mita 324 ọ bụ ezie na ọ nwere ole na ole ọzọ kemgbe ngwụsị afọ 50 mgbe etinyere poolu na-ebunye ya.
Mbuli mbụ dị ise ma ha bụ hydraulic mana taa enwere asaa, n'etiti ọkụ eletrik, itinye na hydraulic. Ma ọ bụ ọkụ ya bụ ihe mbụ. Na mbido ha bụ ọkụ gas ọ bụ ezie na ọkụ ọkụ eletrik gbanwere ha ngwa ngwa ma n'oge na-adịbeghị anya a gbakwunyere ọkụ ọkụ ọkụ nke na-enye ohere ịme egwuregwu nke ọkụ.
Taa ụlọ elu ahụ nwere ụlọ nri ise. N'elu ala mbụ bụ Tour Eiffel 58 maka nri ndị France. Ọ na-ekerịta ala na Gustave Eiffel Room na ọkwa nke abụọ bụ ụlọ nri Le Jules Verne nwere nri nri.
E nwekwara Tour Eiffel nkuru n'onwe ya na iri ụlọ iri na Champagne mmanya nke atọ n'ala. A na-agbakwunye ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka okpuru ulo dị iche iche na n'akụkụ elu ụlọ e debeere Eiffel nke taa chọrọ mma dịka na narị afọ nke XNUMX.
Towerlọ elu ahụ bụ ihe ndị njem nleta kachasị na Paris ma ọ dabara nke ọma na ọ nwere zuru oke na weebụsaịtị ma dị n'ọtụtụ asụsụ, Spanish gụnyere. Mgbe ahụ, ọ ga-adị mma ịzụta tiketi tupu oge eruo ma ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ ya.
Na Jenụwarị 14, 2019 ọnụego na-agbanwe ekwesịrị ịsị na ha yiri otu na saịtị ntanetị yana n'ọfịs igbe. Nke ahụ bụ, ị gaghị echekwa ego na ịzụrụ ihe n'ịntanetị mana ọ nwere ike bụrụ oge. Enwere ọnụọgụ dị iche iche dabere na afọ ndị njem na njem na ọnọdụ na ịrịgo.
Ya mere, a na-ekewa ọnụego ndị a n'ime ọnụego ndị tozuru etozu, ọnụego ntorobịa, ọnụego ụmụaka / nsogbu nwere obere maka ụmụaka nọ n'okpuru afọ anọ.
I kwesịkwara ịtụle ma ị ga-arịgo steepụ ka ọ bụ site n'ụlọ mbugo, n'okpukpu nke abụọ ma ọ bụ n'elu ma ọ bụ ebe abụọ ị na-aga. A) Ee, Ndị a bụ ọnụego ugbu a n'afọ a:
Tiketi mbuli elu nke abụọ: otu okenye bụ euro 16, onye ọ bụla na-eto eto 30, 8 euro, maka nwata ma ọ bụ nwee nkwarụ 10, 4 euro na n'okpuru bụ n'efu.
Tiketi maka steepụ gaa n'okpukpu nke abụọ: onye okenye bụ 10, 20 euro, kwa onye na-eto eto 5, 10 euro, maka nwatakịrị ma ọ bụ nwee nkwarụ bụ 2, 50 euro ma maka ụmụaka ọ bụ n'efu.
Tiketi mbuli elu: otu okenye na-efu euro 25, maka onye ọ bụla na-eto eto 50 euro, kwa nwata ma ọ bụ nwere nkwarụ euro 12 ma ọ ka nwere n'efu maka ụmụaka.
Tiketi maka steepụ + mbuli elu: kwa okenye bụ euro 19, kwa onye na-eto eto 40 euro, nwa ọ bụla ma ọ bụ onye nwere nkwarụ bụ euro 9 na ụmụ aka anaghị akwụ ụgwọ.
Tiketi mbuli elu nke abụọ na-enye gị ohere iburu igwe mbuli elu nke abụọ, nke na-aga n'elu na-enye gị ohere ịrịgo elu site na iji igwe mbuli elu abụọ; tiketi sitere na akwa mgbago gaa n'okpukpu nke abụọ na-enye gị ohere iji steepụ naanị na onye maka steepụ + igwe mbuli elu na-enye gị ohere iji akwa mgbago na ụlọ nke abụọ wee si n'ebe ahụ na igwe mbuli elu nke ihe niile.
Mgbe ọnụahịa anaghị adị iche ma ọ bụrụ na ị zụrụ ihe n'ịntanetị Ee, ị na - echekwa oge, agbanyeghị na ị kwesịrị ịma na tiketi ịrị elu + mbuli elu ma ọ bụ tiketi steepụ gaa n'ala nke abụọ a na-ere ha naanị n'ọfịs igbe. Ndị ọzọ, ee dị n'ịntanetị, ihe kachasị mma bụ nke ahụ Enwere ike ịzụta ihe ahụ ruo ụbọchị 60 tupu oge eruo ruo elekere atọ tupu otu ụbọchị.
Iji zụọ ihe n'ịntanetị, naanị ị gaa na weebụsaịtị ma ị ga-ahọrọ ụdị tiketi na ụbọchị. Ikwesiri igosi otutu ndi nleta ma obu ya.
Ihe ncheta emeghe ụbọchị ọ bụla n'afọ ọ bụ ezie na n'oge ahụ a ga-emechi nzuko ahụ n'etiti Jenụwarị 7 na February 1 maka ụfọdụ ọrụ. N’agbata June 21 na September 2, igwe mbido na-amalite malite n’elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere iri na abụọ nke ụtụtụ, nke ikpeazụ ga-apụ n’elekere iri na otu nke abalị. Ubube ahụ zutere otu usoro ihe omume. Afọ ndị ọzọ afọ mbuli ahụ ga-emepe ọkara otu awa mgbe e mesịrị ma mechie otu awa tupu mgbe ahụ, steepụ ahụ mepee n'otu oge ma mechie 9:12 pm.
N'ikpeazụ ị kwesịrị ịma nke ahụ Gaghị enwe ike ịga ụlọ elu ahụ buru nnukwu akpa ma ọ bụ akpa na nke ahụ enweghi mkpọchi ma ọ bụ igbe ebe ị ga-ahapụ akpa, yabụ gaa obere. Ọzọkwa, ọ bụrụ na enwere ọtụtụ mmadụ, ọ nwere ike bụrụ na emechiri ụfọdụ oghere dị n’ụlọ elu ahụ na-enweghị amamọkwa ma ọ bụ na a ga-enyocha pọọsụ gị ma ọ bụ akpa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » Tiketi na Eiffel Tower
Ihe ị ga-ahụ na Salzburg